Fitantanam-pitondrana · Mey, 2020 · Global Voices teny Malagasy
Fitantanam-pitondrana · Mey, 2020
Tantara mikasika ny Fitantanam-pitondrana tamin'ny Mey, 2020
Mifanohitra amin'ny siansa ny finoan'ity mpanjaka ity ny raokandro ho fanefitry ny COVID-19
Afrika Mainty 30 Mey 2020
Mihevitra ity mpanjaka Nizeriana ity fa afaka manasitrana COVID-19 ny raokandro. Saingy mety mamitaka sy mampidi-doza vahoaka ny fanaovana filazana tsy voaporofo amin'ny alalan'ny Twitter ahitana mpanjohy an'aliny.
Ny COVID-19 iadian'i Pakistan, ny andiam-balala mandravarava ny fambolena
Azia Atsimo 28 Mey 2020
Efa nandravarava ny faritra maro amin'i Afrika, ny saikanosy Arabo ary Azia Atsimo ny loza ateraky ny valala.
Karaiba 20 Mey 2020
Noravan'ny ny polisy tamin-kerisetra ny fihetsiketsehana nataon'ny mpiasan'ny fahasalamana tany Balochistan, Pakistan
Azia Atsimo 08 Mey 2020
Nanao fihetsiketsehana tany amin'ny faritany Balochistan any Pakistan ny mpitsabo matihanina mba hanomezana azy ireo ny Fitaovana Fiarovana Manokana (PPE) mba hiarovana azy ireo amin'ny fifindran'ny coronavirus avy amin'ireo marary kanefa nosamborina ry zareo.
Eoropa Afovoany & Atsinanana 06 Mey 2020